Mamwe maNobel Mubayiro Vanokunda Vanyori Vanotorwa KuFirimu | Zvazvino Zvinyorwa
Nebasa raNobel reMabhuku rakangopihwa munyori weBritish Kazuo Ishiguro, tinoongorora vamwe vanyori vanokunda avo mabasa avo akaitwa bhaisikopo saIshiguro.
Kusiya chokwadi chekuti cinema inodyisa zvinyorwa, zvinoita sekunge painogadziridza iwo mabasa nevakakunda mubairo wekuremekedza wepasirese wepasi rose, ichiri kuwana chimiro chakakura. Asi vanga vachigara vari kubudirira here kana kuti vakaramba vari muzvigadzirwa zvechokwadi kana mutero? Ngatione mimwe mienzaniso ine mazita e Hemingway, Munro, Faulkner, Steinbeck, Cela, Grass, Kipling kana García Márquez.
Iye munyori weCanada akahwina mubairo weNobel mu 2013. Inofungidzirwa se «iyo Chekhov anobva kuCanada«, Ndiye nyanzvi mune pfupi nyaya uye nyaya kwaanoratidzira hupenyu hwezuva nezuva. Mamwe mazita ake ari rudo rwemukadzi ane rupo (1998) u Ruvengo, hushamwari, kudanana, rudo. Dzakati wandei dzakashandurwa ku cinema uye kunyanya kuterevhizheni. Uye pamwe chinonyanya kuzivikanwa chinogadziriswa ndechemusikana uye director Sarah Polley, akafanera muna 2006 Kure nayea, ane nyeredzi Julie Christie.
Cela akakunda Nobel mu 1989 uye pakave nemabasa ake akati wandei akaendeswa kubhaisikopo, senge Mhuri yaPascual Duarte Inotungamirwa naRicardo Franco, naJose Luis Gómez naHector Alterio. KANA Mukoko wenyuchi, naMario Camus, pamwe nekwaya yekodhi yeakanakisa eSpanish cinema. Uye zvakare Iyo isina kujairika uye ine mbiri feat yeArchidona's cipote, naRamón Fernández kana isu tine ruzivo.
Munyori anopokana wechiGerman akahwina mubairo weNobel mu 1999 nebasa rake rinozivikanwa, Ngoma yetini, yakagadzirwa firimu mune yaimbove West Germany co-kugadzirwa neFrance mu 1978. Gore rakatevera rakahwina Palme d'Or yefirimu yepamusoro uye Oscar yeakanakisa firimu rekunze.
Yeye Colombian Nobel mu 1982 mazhinji emabasa ake akagadziriswa, asi nekubudirira kudiki kune vatsoropodzi neruzhinji rwevanhu. Zvichida mazita akadai se Colonel haana wekumunyorera, mushanduro yayo ya1999 yakatarisana naSalma Hayek naMarisa Paredes pakati pevamwe. Chronicle Yerufu Rwakafanotaurwa yakagadziriswa muna 1987, naAnthony Delon, Ornella Mutti kana Rupert Everett. Vaivewo nemifananidzo yavo Rudo uye Mamwe Madhimoni o Rudo munguva yekorera, naJavier Bardem.
Hemingway akakunda iyo Nobel mu 1954 uye kune akawanda enganonyorwa (anopfuura gumi nemashanu) ayo zvakare akazove akakura uye akabudirira ekugadzirisa mafirimu. Ivo vari pakati pavo:
Akweguru negungwa, kubva muna 1958, naSpencer Tracy.
Sarai pfuti mushanduro mbiri naGary Cooper naHelen Hayes muna 1932 uye naRock Hudson naJennifer Jones muna 1957.
Chando cheKilimanjaro, 1952, naGregory Peck naAva Gardner.
Kune avo Bhero Rinobhadhara, 1943, naIngrid Bergman naGary Cooper.
Mubayiro weNobel mu 1962John Steinbeck akarondedzera seasina mumwe mutambo wemushandi weAmerica panguva yeKushungurudzika Kukuru. Mabasa ake anozivikanwa anoenderana neema cinema ari Zve mbeva nevarume, ine yekutanga vhezheni ya1939 uye yechipiri muna 1992. Uye zvechokwadiwo kune izvo zvisingakanganwike Mazambiringa eHasha y Kumabvazuva kweEdheni.
Kipling ndiye aive chirungu chekutanga mukuwana iyo yekunyora Nobel mu 1907. Yake inozivikanwa inozivikanwa, Bhuku resango, yaive neyekutanga kugadziriswa kwakaitwa nemutungamiriri Zoltan korda en 1942, avo vakasarudzika mhedzisiro uye nziyo dzakasarudzwa kumaOscars. Asi pasina kupokana iyo yatinorangarira tese ndeye Walt Disney katuni vhezheni akaitei mukati 1967. Gore rakapera iyo yazvino vhezheni yakatungamirwa naJon Favreau yakaburitswa.
Shaw akahwina mubairo mu 1925 uye akagadzira firimu kuchinjisa yemumwe wake angave anozivikanwa mutambo, Pygmalion. Iyo script yakamupa iye Oscar muchikamu chake. Ivo nyeredzi mariri Leslie Howard naWendy Miller. Asi inonyanya kuzivikanwa yaive inotevera mimhanzi vhezheni ye 1964, iyo yakahwina zvidhori zvisere, My Fair Lady. Hazviiti kukanganwa Rex Harrison naAudrey Hepburn saPurofesa Higgins naElisa, mudiki mutengesi wemaruva uyo anozoedza kuve mukadzi wenzanga yepamusoro.
Faulkner akahwina mubairo weNobel weMabhuku mu 1949, makore akati wandei mushure mekukwakuka kuenda kuHollywood semunyori. Mazhinji ezvinyorwa izvi akaendeswa kuchiratidziro neshamwari yake uye mukuru director Howard Hawks. Imwe yeakakurumbira yaakasaina yaive iyo ye El kurota kusingaperi, inyanzvi yefirimu noir inotarisa Humphrey Bogart naLauren Bacall in 1946.
Faulkner akagadzirisawo mamwe ake mabasa emufirimu, senge Tiri kurarama nhasi (1933), mutambo une Joan Crawford y Gary Cooper iyo Hawks yakarairawo. Muna 1969 Maka Rydell akashandura imwe yemanoveli ake, Vanonhonga, iyo iyo munyori akagamuchira mubairo wePullitzer.
Isu takaona mamwe emabasa aya mune ako ekugadzirisa mafirimu? Takavada here? Chokwadi hongu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Mamwe maNobel Prize Vanokunda Vanyori Vanotorwa kuFirimu